London - njem zuru oke | Njem zuru oke
Ọtụtụ mba nwere ihe ncheta ahụ ma ọ bụ ihe nketa na-anọchite anya ụwa. Otu onye na - eduga ọtụtụ puku mmadụ na ...
London na ụbọchị 4
Isi obodo England bụ ebe ọzọ ọtụtụ ndị njem na-ahọrọ. Jotọ London na ụbọchị 4 bụ ...
Camden Town bụ agbata obi nke London, nke dị na Camden. Enwere ike ịsị na ọ bụ otu n'ime ...
London bụ otu n'ime obodo ndị nwere ọtụtụ ndị njem. Ikekwe ọ bụ n'ihi akụkụ ndị ahụ dị mkpa, n'ihi ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ...
Drinksdị ihe ọ drinksụ drinksụ na-a toụ na London
You ma ụdị mmanya ndị a na-a ofụ na England? Na United Kingdom, obi abụọ adịghị ya na ọ bụ otu n'ime nleta kachasị ...
Nri ụtụtụ bekee
Omenala Bekee nke ụtụtụ bụ ụlọ ọrụ mba. Ọtụtụ ndị bi na UK na-eri nri ụtụtụ dị ka ...
Site na London gaa Roman Baths na ngwụcha izu
por London zuru oke eme 9 afọ .
Ghara obodo London na nleta na njem njem apụtaghị na anyị kwesịrị ịbụ ...
The arụ ọrụ na Shakespeare si Globe
Shakespeare's Globe bụ otu n'ime ebe kachasị amasị gị iji nwee ọ theụ kachasị mma nke ọrụ dị iche iche nke ...
Ebe akụkọ ihe mere eme gafere na Windsor Castle
por London zuru oke eme 10 afọ .
Onu ogugu na ihe owuwu nke ndi njem nleta na obodo London nwere ike buru oke ...
Na London ọbụna ndị nche bụ ihe na-adọrọ mmasị
Ndi mmanye iwu na London bụkwa ndị njem nleta. Site na ndị na-a beeụ a beeụ, ndị na-elekọta oflọ Elu London, site na ndị nche eze na okpu bearskin ha, na ndị uwe ojii mpaghara, nke a na-akpọ ndị egwuregwu, ndị njem nleta na-asọpụrụ onwe ha ga-ese foto n'akụkụ otu n'ime ha.
Nchịkọta Ijipt nke British Museum
Museumlọ ihe nkiri Britain nwere nchịkọta ihe osise kachasị elu nke Egypt mgbe Cairo gasịrị, gụnyere nkume Rosette a ma ama, na nchịkọta nke mummies. N'oge na-adịbeghị anya, ụlọ ihe ngosi nka jiri 3D technology mee ihe iji kpughee ihe nzuzo nke otu n'ime mummies ahụ e kwuru n'elu.